News - Melody 2021 Imaatinka cusub ee Kirismaska ​​Guriga Tuulada Iftiinka Qurxinta / Fasaxyada Fasaxa / Qurxinta Gudaha
Qurxinta Guryaha Christmas House Village Qurxinta / Fasaxyada Fasaxyada / Qurxinta Gudaha
Qurxinta Kirismaska ​​Guriga lights Nalalka midabada leh ee loo yaqaan 'LED light' waa kuwo qurux badan oo dhalaalaya, taas oo indhaha ku haysa sida qurxinta ciida. Muusikada faraxsan ayaa aad ugu habboon jawiga xafladda.
Qurxinta Miisaska Maaraynta leh ： Qurxinta gurigan Kirismaska ​​ah waxay aad ugu habboon tahay gurigaaga, goobtaada shaqada, miiska laga soo galo, miisaanka wax lagu qoro, ama xarunta dhexe ee miiska cuntada, iyadoo lagu darayo jawiga xafladda.
Hadiyadaha Fasaxa ugu Fiican ： Kani waa hadiyad tayo sare leh, miisaan fudud oo Kirismas ah. Waxay ku habboon tahay carruurta, asxaabta ama ururinta. Muusikada farxadda leh, nalalka dhalaalaya, iyo muuqaalka kirismaska ​​ee xiisaha leh ayaa ka dhigaya kirismaska ​​qabow mid diirran.
Dhaqdhaqaaq, Iftiin, iyo Muusig
Nalalka midabada leh, tareenada wareega, iyo muusikada farxadda leh ee Masiixiga waxay abuuraan jawi xafladeed oo xoog leh waxayna ku daraan jawi soo jiidasho leh xafladda soo socota.
Cabbirka saxda ah
Cabirku waa dhexdhexaad waana la dhigi karaa miiska, qubbad, miiska labiska, miiska sariirta. Way fududahay in la keydiyo oo la abaabulo markii aan la isticmaalin, mana fadhiisanayo meel bannaan.
Ammaan Ka Isticmaal
U isticmaal baytariyada 3AA (Kuma Jirto) korantada. Waxay ku shaqeysaa xaalado danab oo hooseeya (4.5V), taas oo ammaan ah. Uma baahnid inaad ka walwasho dhibaatooyinka korantada ee carruurta ama xayawaanka guriga ka yimaada.
Iibsade qaaliga ah, saameynta iftiinka, iftiinka kormeeraha, cabirka gacanta, iwm, waxaa jiri kara xoogaa kala duwanaansho yar oo midabka iyo cabirka u dhexeeya sawirka iyo sheyga dhabta ah. Si kal iyo laab ah u rajee inaad fahmi karto! Mahadsanid.